Zavakanto & Kolontsaina · Oktobra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Zavakanto & Kolontsaina · Oktobra, 2010
Tantara mikasika ny Zavakanto & Kolontsaina tamin'ny Oktobra, 2010
Iran: Rahona mainty manambana ny tanànan'i Teheran
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 31 Oktobra 2010
Sangany amin'ireo blaogin-tsary Iraniana i Kosoof, izay manapariaka saripika: rahona mainty manambana ny tanànan'i Teheran. Feno rahona ny tranoko, hoy izy ao amin'ny blaoginy.
Brunei sy ny hiran'i Maher Zain
Azia Atsinanana 17 Oktobra 2010
Manamafy ny fivantanan'ny hirany ho an'ny ankapoben'olona ny nitsidihan'ilay mpihira Maher Zain , izay fantatra fa mifototra amin'ny amin'ny aingam-panahin-kira Islamika, an'i Brunei. Mbola manako any amin'ny tontolom-bolongana sy tontolon-tsioka an-tserasera (twittersphere) ihany hatramin'izao ny nitsidihan'i Zain tany Brunei vao tsy ela akory izay.
Iran: Sary andavanandron'ny zavakanto sy ny tantara Persiana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 16 Oktobra 2010
Tsy resaka politika sy fanoherana ihany tsy akory no ataon'ny olo-tsotra tia mampita hafatra, fa miresaka momba ny fiainana, ny zavakanto ary ny tantara ihany koa. I Vahid Rahmanian dia mpamaham-bolonga-tsary tia mamorona ka mamoaka ny sarin'ny toerana manantantara any Iran.
Tontolo: Iray Andro Eto An-Tany – 10.10.10
Amerika Avaratra 16 Oktobra 2010
Ny tetikasa One Day on Earth project [Iray andro eto an-tany], izay andro iray ahafahan’ireo olona maneran’izao tontolo izao manao horonantsary, ary mandefa izany mba ho anisan’ireo horonantsary fanadihadiana sy fahalalàna maneho indray mipika ny toetoetran’ny olombelona.
Amerika Latina: maneho hevitra mikasika ny loka Nobel ho an'ny literatiora azon'i Mario Vargas Llosa
Amerika Latina 15 Oktobra 2010
Through blogs and Twitter, Latin Americans shared their different views on the announcement that Peruvian writer Mario Vargas Llosa had won the Nobel Prize in Literature.
Afrika: Sarimihetsika mandiso ny fijery an'i Afrika
Afrika Mainty 13 Oktobra 2010
Africa is a Country no miresaka ilay sarimihetsika Madagascar amin'ny fomba fijery an'i Afrika anaty sarimihetsika: “Tsy mila mandinika lalina akory dia hahita fa fomba fitantara-na mpanjanatany (ilay sarimihetsika) Madagascar. Ny Tandrefana no lazaina fa maridrefy, ary i Afrika kosa lazaina ho saovazy [dia] sy vahiny [exotique] mba hanasongadinana ny...
Vietnam: Fety faha-arivo taona an'i Hanoi
Azia Atsinanana 12 Oktobra 2010
Arivo taona i Hanoi. Naharitra hafoloana (1-10 oktobra) ny lanonana fanamarihana izany fotoan-dehibe izany. Mizara ny fomba fijery sy ny eritreriny tamin'ny nanatontosana ity fihetsiketsehana ity ny mpamaham-bolongana. Aaron Joel Santos mitantara ny fizotry ny sehatra any Hanoi nandritra ny andro voalohan'ny fankalazana Ho feno 1000 taona i Hanoi. Haharitra...
Filipina: Mandihy ny mpikarakara mpandeha
Azia Atsinanana 11 Oktobra 2010
Fampiderana ny resaka fiantohana ny dia amin'ny fiaramanidina no niarahan'ireo mpiasa amina zotram-pitaterana an'habakabaka mpikarakara sidina ara-barotra ao Filipina navoaka an-tsarimihetsika tsy ela akory izay tao amin'ny YouTube. Miady hevitra ireo mpampiasa aterineto raha fampialàna voly sa "sexisme" izany.
Fahaiza-mahandro Meksikana nambàran'ny UNESCO ho Raki-tsarobidin'ny Lovan-tsofina sy tsy fanova ananan'ny zanak'olombelona
Amerika Latina 10 Oktobra 2010
Ny fahaiza-mahandro meksikana dia malaza amin'ny fahamaroan'ny karazan-tsirony sy ny lokony, ny ny fifangaroana karazan-taharo manaitaitra sy ny zavatra ilaina manokana ao anatiny. Tamin'ity taona ity no nanambaràna azy ho Raki-tsarobidin'ny Lovan-tsofina sy tsy fanova ananan'ny zanak'olombelona - "Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity" avy amin'ny UNESCO.